Alahlwayo Ukuhlukaniswa nezingubo, Kn95 Mask, alahlwayo Medical Cap - Jingzhao
Yethula ubuchwepheshe bokukhiqiza obuthuthukisiwe emhlabeni jikelele
Ubuchwepheshe obuthuthukisiwe bamazwe omhlaba kanye nekhwalithi ephezulu
Ikhiqiza kakhulu okokuzihlukanisa, okokuvikela, okokugqoka nezembozo zezicathulo neminye imikhiqizo esekelayo yokuvikela.
Kusukela yasungulwa, iNanchang Jingzhao Medical Technology Co, Ltd.yaziwa yile mboni ngobuqotho bayo, amandla nekhwalithi yomkhiqizo.
INanchang Jingzhao Medical Technology Co, Ltd. itholakala eXiaolan Economic and Technological Development Zone, Nanchang City, esifundazweni saseJiangxi. Ikhiqiza kakhulu okokuzihlukanisa, okokuvikela, okokugqoka nezembozo zezicathulo neminye imikhiqizo esekelayo yokuvikela. Kuyibhizinisi lohlu lwabamhlophe loMnyango Wezohwebo waseChina.
Ekuqaleni konyaka, abezokwelapha bakwaJingzhao bethule izintambo eziningi zokukhiqiza izindwangu ezingaxutshiwe, kufaka phakathi indwangu ejwayelekile engeyona eyelukiweyo, ukumelana okuqinile okungeyona eyelukiweyo (ama-SMM), Indwangu ye-Spunlaced composite non-woven (i-SMS), eboshwe okungeyona Indwangu -woven (PP noma PE enamathela). Le nkampani isungule uhlelo lokuphathwa kwekhwalithi "yokuqala ngokuya nge-ISO 9001/85" sonke isikhathi. Ngaphezu kwalokho, inendawo enkulu ka-100000 yokuhlanzwa kwezinga lokusebenzela ngokuhambisana nezinga le-GMP lamadivayisi wezokwelapha, anemishini ephelele yokuhlola nokuhlola, futhi ochwepheshe abangaphezu kuka-100 abazibophezele ku-R & D, ukwakhiwa nokukhiqizwa imikhiqizo -woven, futhi wajoyina imikhiqizo yokuvikelwa kwemvelo kazwelonke engeyona eyelukiweyo yendwangu yokukhiqiza kanye nomkhakha wokucubungula ojulile